Somali News 09.13.21 | KWIT
Gudoomiyaha Nebraska Pete Ricketts ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu ku biiro gudoomiyaasha kale ee Jamhuuriga si uu uga hortago Madaxweyne Joe Biden oo si weyn u doonayay talaalka maxkamada. Wuxuu rumeysan yahay in dowladda Federaalka ay ka gudubto awoodeeda iyada oo ku amartay in dhammaan loo -shaqeeyayaasha leh in ka badan 100 shaqaale ay u baahan yihiin in la tallaalo ama la baaro fayraska toddobaad kasta.
Ricketts wuxuu ku dhiirrigeliyay dadka inay is tallaalaan oo ay xirtaan maaskaro, laakiin wuxuu ka hor yimid waajibaadka.
Afar kale oo reer Koonfurta Dakotan ah ayaa u dhintay dhibaatooyin ka dhashay COVID-19. Waxaa jiray in ka badan 500 infekshanno cusub oo 32 ay ku sugnaayeen Degmada Lincoln, sida ay sheegtay Waaxda Caafimaadka.
Tirada bukaannada COVID-19 ee togan ayaa sii waday inay hoos ugu dhacaan 200. Heerka ugu sarreeya wuxuu ahaa 230.
Codbixiyeyaasha Nebraska ayaa oggolaaday khamaarka khamaarka ee waddooyinka tartanka fardaha ee gobolka sannadkii hore, laakiin weli waxay ahaan doontaa ugu yaraan dhowr bilood oo dheeraad ah ka hor intaan casinos kasta laga oggolaan gobolka oo ay ku jiraan halkan Siouxland.
Sababtoo ah xeer -ilaaliyeyaasha ayaa weli u qoraya xeerarka iyaga. Habka codsiga rasmiga ah waxaa laga yaabaa inuusan bilaaban ilaa horraanta sannadka dambe.
WarHorse Gaming, oo ah qayb ka mid ah Ho-Chunk, Inc., ayaa maamuli doonta oo ka shaqayn doonta ciyaaraha Koonfurta Sioux City waxayna shuraako la tahay urur kale oo loogu talagalay casinos-ka Omaha iyo Lincoln.